Uyikhawulezisa njani imetabolism yakho? | Ulwazi oluluncedo kuye wonke umntu
Rhoqo, ubunzima obugqithisileyo buxhomekeke ngqo kumgangatho wemetabolism emzimbeni wethu. Kukho abantu abanokutya nantoni na abayifunayo, nakweyiphi na into kwaye bangaze batyebe kwaphela, xa abanye befuna ukubek 'esweni ukutya kwabo kunye nokuzilolonga ukugcina imizimba yabo isemgceni.
Abantu abaphethwe yi-hypometabolism ubuncinci banethamsanqa: iikhalori ezongezelelekileyo, kwaye sele betyeba. Banokuphazamiseka komzimba okuphantsi kakhulu, apho iikhalori ezifunyenweyo zingasetyenziswanga kumandla, njengoko bekulindelwe, kodwa zibekwe kwenye indawo emacaleni kwimiqolo engeyomfuneko.
Ke ngoko, ukuba ufuna ngenene ukuba nomfanekiso omangalisayo, kuya kufuneka uqale inkqubo imetabolism... Ngaphandle kwamathandabuzo, yingcali yezondlo kuphela onokukunika "isikhokelo sokwenza" esichanekileyo, uqinisekise ukuba uneengxaki zokutya emzimbeni.
Nangona kunjalo, ukuba kusekho ixesha elininzi ngaphambi kokuba ubonwe ngugqirha, kwaye ufuna ukuthatha inyathelo ngoku, okanye ukuba ufuna nje ukuba nempembelelo entle emzimbeni wakho, zininzi iindlela ezilula zokuphucula imetabolism yakho ekhaya.
Uyikhawulezisa njani imetabolism yakho ekhaya
1. Ukuhamba kwezemidlalo okude kumoya omtsha kunceda ukutyebisa igazi ngeoksijini, etshisa ngokugqibeleleyo zonke iikhalori kunye namafutha aqokelelwe phantsi kolusu.
Ioksijini ikwanxibelelana nawo onke amalungu omzimba, iwenza omelele kwaye abe sempilweni.
Kodwa khumbula ukuba ukubaleka nje kunye nokuhamba ngokukhawuleza kuya kukunceda utshise amanqatha, ukuhamba ngokuthe chu akuyi kuzisa lukhulu.
2. Kuphela sisidlo sakusasa esipheleleyo nesinempilo ngokwenene "esivusa umzimba", siqala inkqubo ye-metabolic, ecothisa ngokuhlwa. Ukuba urhoxisa isidlo sakusasa, umzimba uya kuhlala "ulele", oya kuchaphazela umsebenzi wakho kunye nemetabolism.
3. Iti eluhlaza iyisusa ngokugqibeleleyo ityhefu kunye neetyhefu emzimbeni ezithintela imetabolism, kwaye isuse nokudumba. I-caffeine ekwiti itshisa iikhalori kwaye inefuthe elihle entliziyweni.
Khawukhumbule nje ukuba kufuneka usele iti eluhlaza esandula ukwenziwa, kwaye ungabi ngaphezulu kweekomityi ezintathu ngosuku.
4. Sele ibonakalisiwe ukuba isinamon iyakhawulezisa inkqubo ye-metabolic ngamaxesha angama-20. Kuyanceda ukwaphula iswekile ngokukhawuleza, ukunciphisa iswekile yegazi, ethi ngokuqinisekileyo inciphise ukutya.
5. Izondlo kwezempilo eCalifornia zifumanise ukuba ukutya kwemagniziyam mihla yonke kunefuthe elihle kwimetabolism, kutshisa amanqatha kwaye kukhuthaza ukwehla kobunzima.
Ungayithatha njengepilisi okanye ngokutya izixa ezikhulu zemidumba, isipinatshi, ibran kunye nekhowudi.
6. Qiniseka ukuba ulungisa ukulala kwakho! Kuphela kuphela ngexesha lokulala apho umzimba uphumla khona, uzuza amandla kusuku olusebenzayo, kwaye uvelise ne-hormone yokukhula, eyimfuneko ekuhlaziyweni kweeseli zobuchopho kunye nokuphucula imetabolism.
Kwakhona, le hormone ibalulekile kuye wonke umntu ophulukana nobunzima, kuba kunciphisa kakhulu ukutya.
Umrhumo we-monastic wokulahleka kwesisindo: iresiphi, ukwakhiwa kunye nokuphononongwa
Zeziphi iindlela zokunciphisa isemetabolism?
Edlulileyo Lingakanani ixesha olichithayo phakathi kokuzilolonga
Imibuzo ye-57 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,753.